Ny loko misy ny rano nampianarin'i Lugman Reza | Famoronana an-tserasera
Ny loko-rano tsy dia mora araka ny fahitana azy ioKoa satria mila fanazaran-tena be dia be izany, ary na dia iray amin'ireo fitsipi-pifehezana voalohany azo ampianarina ao an-tsekoly aza izany dia mila fotoana lava be vao ho mpampianatra ao.
Manana izany ny loko misy an'i Lugman Reza fahatsapana fa manana ora maro ao amin'izy ireo mba hananana an'io fifehezana io amin'ny loko sy ny fahaizana mifantoka amin'ny antsipiriany hiteraka zava-kanto kanto. Zavatra iray izay azo zahana amin'ny takelaka tsirairay izay zarainay avy eto amin'ny Reza momba io tontolon'ny bibidia io.
Reza dia mampianatra tena efa nanao sary be ary nandany ora maro hianarana ny fanandramana hoso-doko amin'ny rano sy ny fanaovana sary amin'ny pensilihazo. Ho an'ity mpanakanto ity, ny ravin-taratasy dia faritra filalaovana ahafahany mamorona indray ny sainy.
Manomboka amin'ny fahazazany ka hatramin'ny sekoly ary amin'ny taona manaraka nanana ny sary ho ampahany aminy ary izany dia nampiharina tamin'ny fomba nianarana samirery tamin'ny alàlan'ny fomba samihafa toy ny pensilihazo, arina, savoka na menaka. Ny andro nahitany ny lokon'ny rano dia saika nitia an'io fifehezana io izy mba hahatonga azy ho ampahany aminy, araka ny hita ao amin'ny sary azonao jerena eto.
Mampiasa ny toetrany sy ny fahaizany koa izy mba hahazoana vokatra miavaka sy ny fahazoany ny fifandraisana misy eo amin'ny loko, ny rano sy ny taratasy. Singa telo natambatra tamim-pahendrena no afaka manome kalitao tsara hita.
Raha te hanohy ianao mahafinaritra amin'ny asany tsirairay avy, Reza manana tranokala manokana artjongkie.comny Instagram ary ny azy Facebook. Fomba telo hitadiavana mpanakanto vaovao harahina ary izay mahafoy tena amin'ny zavatra ataony, zavatra manan-danja indrindra amin'ity kanto sy sary ity.
Mpanakanto mexikana izay manana fanoloran-tena amin'ny loko rano koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Sary nataon'i Watercolor Lugman Reza
Harena sary maimaimpoana dia hoy izy:
Tondra-drano mahatalanjona, na iza na iza manana tanana handoko toy izany, na rindrambaiko mamorona azy ho anao;)
Valiny amin'ny loharanom-baovao maimaim-poana
Marina izany :)
GIF feno fihetsiketsehana mahatalanjona rakotra Rock angano 22